Nitsangana ny fitsarana avo : Tsy hisy intsony ireo tsimatimanota -
AccueilRaharaham-pirenenaNitsangana ny fitsarana avo : Tsy hisy intsony ireo tsimatimanota
Omaly no nahavita ny fianianany ireo mpikambana miisa 24 ao anatin’ny Fitsarana Avo (HCJ). Ny 11 amin’ireo ihany no mpikambana maharitra, fa ny ambiny kosa dia ho mpikambana mpisolo toerana. Ity rafi-pitsarana ity izay nahabe resaka ny fananganana azy. Ny tsy fitsanganan’ny Fitsarana Avo mantsy no fototry ny fanakorontanana ny firenena nataon’ireo depiote vitsy an’isa eny amin’ny antenimieram-pirenena, ary lasa niitatra ka nahatonga izao krizy politika ankehitriny izao. Tafatsangana izany ankehitriny, ary ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no mpitondra nahasahy nanangana izany. Raha ny tokony ho izy mantsy dia efa natsangan’ireo mpitondra rehetra teo aloha ity rafi-pitsarana ity, nahafahana nitsara ireo tompon’andraikitra ambony nanao fahadisoana teto amin’ny firenena. Ny antony, dia efa nolazain’ny filoha ankehitriny fa tsy nanana, ary tsy hanana eritreritra ny hanao fahadisoana eo amin’ny vahoaka malagasy ny tenany, fa hikatsaka ny fanarenana sy ny fampandrosoana hatrany ny firenena kosa araka ny kabary efa fanaony matetika mandritra ireny fitokanana zava-bita maro ireny.
Mazava ny momba ny Filoham-pirenena raha ny fitsanganan’ny Fitsarana Avo no asian-teny, fa ny an’ireo mpitondra teo aloha kosa dia mampametra-panontaniana. Ny hanafoana ny fisian’ny tsimatimanota mantsy no tanjon’ny fananganana ity rafi-pitsarana ity. Izay rahateo no votoatin’ny lahateny nataon’ny filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao nandritra ny nanatanterahana ny lanonam-pitsarana teny Anosy omaly. Iaraha-mahalala fa tsy misy madio tanana na iray aza, fa saika naorina tao anatin’ny rà latsaka avokoa ny fitondran’ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenena teo aloha. Ny repoblika voalohany dia ny 13 mey 1972, ny faharoa dia ny 10 aogositra 1991, ary ny fahatelo dia ny 7 febroary 2009. Olona ampolony maro avokoa no namoy ny ainy nandritra ireo hetsika ireo. Izany hoe raha ny tokony ho izy, dia tsy misy afa-bela amin’ity fitsarana Avo ity ireo mpitondra rehetra nifandimby teto amin’ny firenena izay mbola velona. Ny akaiky indrindra amin’ireny dia ny raharaha 7 Febroary 2009. Mbola maro mantsy ireo olona tsy nahita ny havany hatramin’ny androany, ka miandry ny fanazavana ny tena marina momba ity raharaha ity. Ankoatra ireo filoha teo aloha, dia maro ihany koa ireo manam-pahefana tsy maintsy handalo eny anivon’ity fitsarana Avo ity noho ny fahadisoana vitany teto amin’ny firenena. Maro araka izany no andrasan’ny vahoaka malagasy amin’ny vokatry ny asan’ity HCJ ity, taorian’ny nitsanganany. Ho diso fanantenana kosa ireo mpanao politika nihevitra fa ny Filoham-pirenena ankehitriny no hotsaraina voalohany ao anatin’ity Fitsarana Avo ity. Efa maro tsy tambo isaina mantsy ireo fantatra fa nihevitra ny tenany ho tsimatimanota teto amin’ny firenena nialoha izao fitondrana izao, satria tsy nisy rafi-pitsarana nahafahana nitory azy ireny hatramin’izay.